Daawo Sawirrada: Madaxweynaha oo si rasmi ah Baydhabo uga furay shirka madasha wadatashiga Qaran – Radio Muqdisho
Daawo Sawirrada: Madaxweynaha oo si rasmi ah Baydhabo uga furay shirka madasha wadatashiga Qaran
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee Dowlad Goboleedka Koonfuur Galbeed, si rasmi ah uga furay shirka Madasha Hoggaamiyeyaasha Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay in ujeeddada iyo xikmadda ka dambeysa dhismaha Madasha Hoggaamiyeyaasha qaranka ay tahay in la helo nidaam la isla wada oggol yahay, iyadoo laga duulayo mabda’a ah in lagu dhaqaaqo wixii maanta la qaban karo, isla markaana aan gadaal looga laaban hawlaha dib u dhiska siyaasadda Soomaaliya.
“Danta caamka marka la hormariyo ayaa tan gaarka ah la gaari karaa. Waxaan halkan isugu nimid inaan Soomaaliya horay u dhaqaajino, waddada horumarkana aan u horseedno. Maanta waxaan halkan ku soo gaarney inagoo wadajirna oo aan khilaaf iyo isqabqabsi jirin. Waxaa naga go’an inaanu dalku marnaba gelin marnaansho siyaasadeed, oo aan diyaarino nidaam awoodda dalka la isugu wareejiyo nidaam dimoqraadi ah oo nabadeed’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa uu intaa ku darey Madaxweynaha in qof kasta oo Soomaaliyeed uu karaamo, xuquuq iyo xushmad ku leeyahay dalka, isla markaana loo baahan yahay in la yareeyo cabsida iyo kalsooni la’aanta laga dhaxley xilliga colaadaha.
Madaxweynaha ayaa Yiri “Waxaan doonayaa inaan mar kale shacabka Soomaaliyeed u sheego in caalamku uu garab inaga siin karo dhinacyo badan, balse marka ay timaaddo arrimaha siyaasadda ay tahay mas’uuliyad iyo hawl u taalla Soomaalida oo keliya. Waxaa hubaal ah in kulamada noocaan ah ay abuuri karaan kalsooni dhexdeena ah, mid beesha caalamka ka timaadda iyo in ugu dambeyntii aan dhabbada saarno waddada horumarka iyo nabadda’’.
Madaxweynaha waxaa uu sheegay in nidaamka federaalka ee Soomaaliya laga dhaqan geliyey uu waddanka u horseeday in taako kasta oo dalka ka mid ah maamul uu ka jiro, taasina ay gacan ka geysaneyso sugidda amniga iyo baahinta xukunka.
Waxaa sidoo kale shirka hadalo ka jeediyay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, Maxamed Cusmaan Jawaari, Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka, Maxamed Cumar Carte iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Qodobada ugu waaweyn ee la filayo in looga doodo shirkan ayaa waxaa ka mid ah doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan sannadkan, saadka iyo amniga doorashada, saamiga haweenka ee goleyaasha dowladda, sameynta guddiga xallinta khilaafaadka ee doorashada, arrimaha dib u eegista dastuurka, iyo hannaanka dib u dhiska iyo dib u habeynta booliska.
Daawo Sawirrada: Sida diirran ee madaxweynaha maanta loogu soo dhaweeyay Baydhabo
Shirka Golaha Wasiirrada oo looga hadlay Arrimo dhowr ah